सभापतिको साझा उम्मेदवार छान्दा बाँकी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छः वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल - Nepal Daily
सभापतिको साझा उम्मेदवार छान्दा बाँकी सबैलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छः वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल
सोमबार, १८ असोज २०७८, १४ : ४८ मा प्रकाशित
नेपाली कांग्रेसको आसन्न महाधिवेशनमा संस्थापनइतर समूहले सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध साझा उम्मेदवार तय गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। देउवाले पार्टी चलाउन नसक्ने सो समूहको ठहर छ। प्रधानमन्त्री देउवाले लामो समयदेखि सरकार विस्तार पनि गर्न सकिरहेका छैनन्। यही सन्दर्भमा कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसँग गरेको कुराकानीः
नेपाली कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न?
नेपाली कांग्रेस धेरै ठूलो विकृतिको सिकार बनिराखेको छ। यसबाट पार्टीलाई उद्धार गर्ने हाम्रो आगामी योजना छ। त्यसका लागि पार्टी सुधारको अभियानमा लागेका जो जो छौँ, हामी सबैले मिलेर यसपालि विकल्प दिन्छौँ। हामी मिलेर विकल्प दिने भनेर सुरुबाट नै लागिराखेको हुनाले सामूहिक संवादबाटै निर्णयमा पुग्छौँ।
मेरो उम्मेदवारीको हकमा भन्ने हो भने म अघिल्लो निर्वाचनमा सभापतिमा सफल हुन नसकेको व्यक्ति हो। र, त्यसपछि पनि निरन्तर पार्टीमा प्रतिपक्षीय भूमिका निभाउँदै आएको छु। त्यसको नेतृत्व गरेरै आइरहेको छु। स्वाभाविक क्यान्डिडेट त म हो। तर पनि म सबै साथीहरुलाई सँगै लिएर निर्णयमा पुग्छु।
अहिलेको नेतृत्वले पार्टीलाई बर्बादै पार्यो भन्दै आउनुभएको छ। के सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्न त?
शेरबहादुरजीबाट काम चलेन। शेरबहादुरजीबाट न राज्य सञ्चालन राम्रोसँग हुन सक्यो, न पार्टी सञ्चालन। उहाँमा स्वार्थबाहेक अरु केही देखिएन। जो मान्छे कुनै उदेश्यका लागि समर्पित हुँदैन, यो प्रजातन्त्रको महान लडाइँमा सफल हुन सक्दैन। फिट हुन सक्दैन।
हामी प्रजातन्त्रको महान् लडाइँमा छौं, लोकतन्त्रको महान् लडाइँमा छौं। अत्यन्त आधुनिक नेपाल बनाउने, लोकतान्त्रिक नेपाल बनाउने र प्रगतिशील नेपाल बनाउने, नेपालको सारा कमजोरी, जडतालाई अन्त्य गरेर प्रगतिको पथमा अगाडि बढाउने र नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने हाम्रो महान् अभियान हो।
त्यो अभियानलाई शेरबहादुरजी जस्तो ‘सेल्फ सेन्टर्ड’ मान्छेले सघाउ पुर्याउन सक्दैन। नसक्ने सिद्ध भयो। त्यस कारण नेपाली कांग्रेसका देशभरिका साथीहरुलाई विचार गर्न म अनुरोध गर्छु। सोच्न अनुरोध गर्छु।
हाम्रो महान् अभियानलाई महत्व दिनुहुन्छ कि कुनै व्यक्तिप्रति भक्तिभाव राखेर तपाईंहरु आफ्नो उदेश्यबाट विचलित हुनुहुन्छ? सम्पूर्ण कांग्रेसजनमा मेरो यही आह्वान छ।
तपाईंले देउवाविरुद्ध साझा उम्मेदवार तय गर्छौँ भनेको महिना दिन पुगिसक्यो। तर, अझै तपाईंकै समूहका चार जनाले म लड्छु भनिरहनुभएको छ। यसो गर्दा नेतृत्व तपाईंहरुले नै देउवाको हातमा बुझाउन लागेको देखियो नि?
त्यो त सबै साथीहरुले आफू–आफूले म–म भनेर सोच्नु पर्यो। एक पटक धरातलीय यथार्थ सबैले सोच्नु हुनेछ भनेर म धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा गरिरहेको छु।
अहिलेको यथार्थ के हो? देशको माग के हो? अहिलेको लोकतन्त्रको माग के हो? अहिलेको जनताको अपेक्षा कांग्रेसबाट के हो? त्यो हामीले कहाँबाट पुरा गर्न सक्छौँ। व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा होइन। व्यक्तिको पद प्राप्तिको कुरा होइन के। म साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु– यहाँ व्यक्तिको पद प्राप्तिको सवाल छैन, यहाँ त एउटा महान् लक्ष्यमा अगाडि बढाउने र कांग्रेसको ‘मिसन’लाई पुरा गर्ने दायित्व छ। त्यतापट्टि सोचौं। साथीहरुलाई म त्यो आग्रह गरिरहेको छु।
तपाईंले भनेजस्तो अर्को कुनै व्यक्ति साझा उम्मेदवार बन्ने स्थिति आयो भने आगामी दिनमा कांग्रेसमा तपाईंको भूमिका के रहन्छ ?
होइन, होइन। हामी ‘कलेक्टिभ्ली’ छलफल गर्छौं। कसलाई कुन ठाउँमा राखेर टिमलाई ‘म्यानेज’ गर्न सकिन्छ। सबै ‘एडजस्ट’ पनि हुनुपर्यो। जुन एउटा ‘स्पिरिट’, समान उदेश्य लिएर अगाडि बढेकाहरुको बीचमा सहयात्रा, सहयोग, आपसी तालमेलको भावना, व्यवस्था पनि मिल्नुपर्यो।
कसलाई कुन ठाउँमा राखेपछि सबै ‘फिट’ हुने, सबैले एउटा–एउटा भूमिका लिएर अभियानलाई अगाडि बढाउन सजिलो पर्छ, त्यो कुरा तिर सोच्नु प¥यो नि अब। अब यत्तिकै आ–आफ्नो हठ लिएर कसैले पनि चल्नु हुँदैन।
त्यसो भए तपाईंको समूहको सम्भावित उम्मेदवार को ?
सम्भावित उम्मेदवार को भन्ने कुरो छलफलमा आउँछ। को हो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा पनि होला। थाहा हुन्छ। सम्भावित उम्मेदवार मेरो मुखबाट यही हो भन्न अहिले नै तयार छैन। किनभने हामी छलफल, सल्लाहका साथ सामूहिक निर्णयमा विश्वास गर्छौं। सामूहिक निर्णयमा छलफल हुँदा निष्कर्ष आउँछ।
पार्टीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै आउनुभएको छ। आगामी मंसिरमै महाधिवेशन हुनेमा कतिको ढुक्क हुनुहुन्छ ?
पार्टीको वैधानिकता त संकटमा परिनै सक्यो। आफ्नै विधानलाई हामीले उल्लंघन गरिसक्यौं। पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमिति, केन्द्रीय नेतृत्वले विधानलाई एकातिर मिल्काइसक्यो। यो सबैभन्दा दुःखद् कुरा हो।
अत्यन्त पीडादायी कुरा हो मेरा लागि पनि। देशको संविधानले पनि दिएको सीमा नाघिसक्यो। तैपनि अब चुनावको क्रममा हामी प्रवेश गरिसक्यौं। त्यसकारण हामी चुनाव गर्छौं। र, हामी सबै निकायलाई, सबै संवैधानिक पक्षलाई आश्वस्त गरेर चुनावमा गयौं। चुनाव गर्ने कर्तव्य पुरा गर्छौं भनेर हामी चुनावी कार्यक्रममा प्रवेश गरिसकेका छौं। त्यसकारण तोकिएको समयमा चुनाव हुनुपर्छ।
कांग्रेसमा क्रियाशील सदस्यताको विवाद देखिएको छ। यो साँच्चैको विवाद हो कि तपाईंहरुले बखेडा झिकेको ?
क्रियाशीलको विवाद त भयानक विवाद हो। भयानक विवादमा हामीले अनेक गरेर सहेर, अनेक कुरा मान्दिएर हिँड्न परेको छ। यति धेरै हेराफेरी भयो, यति धेरै क्रियाशील सदस्य कांग्रेसभन्दा बाहिरबाट ल्याएर बाँडियो। यति धेरै विधि–पद्धति मिचेर जो पायो उहीलाई, जस्तो पायो उस्तो प्रक्रिया मिचेर भर्ने र आफूले जसरी हुन्छ ‘क्याप्चर’ गर्ने योजनाबद्ध षडयन्त्र भयो पार्टीभित्र। त्योसँग लड्दा–लड्दा अहिलेसम्म हैरान भइएको छ।
कांग्रेसले सरकारमा जान खासै रुचि देखाएको थिएन। गठबन्धनले जबर्जस्ती तानेर सरकारमा पुर्याएको हो ?
नेपाली कांग्रेस सरकारमा जान खोजेको होइन। मैले त कांग्रेसलाई सरकार चाहियो भनेको पनि होइन। कम्युनिस्टहरु सत्तामा छन्। उनीहरुलाई जनताले भोट दिएका छन्। कम्युनिस्टले नै सत्ता चलाउन् भनेर मैले त पटक–पटक भन्दै आएको पनि थिएँ।
तर, केपी ओलीले देशलाई विपरीत बाटोमा लग्न खोजे। संविधानले निर्धारित गरेको बाटोभन्दा बाहिर अन्तै लैजान खोजे। यो जुन परिवर्तन आएको छ, त्यसको विपरीत बाटोमा देशलाई लैजान खोजे। प्रतिगमन निम्त्याउन लागे।
अब त्यसबाट देशलाई बचाउनुपर्ने सवाल आयो। संवैधानिक उपलब्धिलाई बचाउने सवाल आयो। यो लडाइँ त परिवर्तन रक्षाको लडाइँ हो। संविधानको रक्षाको लडाइँ हो। त्यसको लागि केपीलाई हटाउन प्रधानमन्त्री कोही त खडा गर्नुपर्यो।
त्यसमा हाम्रै सभापति खडा गरियो। उहाँले अहिलेसम्म सरकार विस्तार गर्न सक्नुभएको छैन। भ्यागुताको धार्नी पुरा भइराखेको छैन। कहिले पुरा गर्नु हुन्छ अब हरौं न।
किन विस्तार गर्न सक्नुभएन ?
हेर्नुस्, म त के भन्छु भने– व्यक्तिको कार्यक्षमता हो। व्यक्तिको भित्रबाट केही गर्छु भन्ने संकल्प शक्ति हो। यो संकल्प शक्ति नै देखिएन। कल्पनाशीलता नै देखिएन। यत्तिको परिस्थितिमा पनि धेरै कुरा गर्न सकिन्थ्यो। त्यो केही पनि गर्न सकिरहेको मैले देखिरहेको छैन। त्यसै किंकर्तव्यविमूढ भएर अनिर्णयको बन्दी भएर बसिरहेको देख्दा मलाई नै खसखस भइराखेको छ। मलाई नै दिक्क र वाक्क लागिराखेको छ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गर्न नसक्नुभएको कि सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरुले गर्न नदिएको ?
होइन–होइन। नाच्न जान्दिनँ आँगन टेढो हो। आफूले गर्न नजान्ने गठबन्धनलाई दोष देखाउने? गठबन्धनलाई पनि ल्याउनु प¥यो नि त्यो ठाउँमा। मैले त भनिसकेको छु– गल्ती त उहाँले त्यो बेलामै गर्नुभयो जुन बेला संसद् विघटन गरेर अदालतले पुनःस्थापन गर्यो।
त्यतिखेरै केपी ओली हटाउने कुरामा उहाँले सहमति दिनुपर्थ्यो। दिनुभएन। उहाँ कुरेर बस्नुभयो। फेरि पनि उहाँ धेरै पछिसम्म कुरेर बस्नुभयो। जसले गर्दा अप्ठ्यारोमा आफैँ फस्नुभयो। उहाँ आफैँले निम्त्याएको हो यो दशा। यो दशा निम्त्याउने स्वयम् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्छ।
अहिले ‘अर्ली इलेक्सन’ को कुरा पनि चर्चामा आएको छ नि ?
‘अर्ली इलेक्सन’ राष्ट्रिय सहमतिले गर्न सकिन्छ। स्थानीय चुनावभन्दा राष्ट्रिय चुनाव पहिल्यै गर्दा राम्रो हुन्छ भन्ने सबैको ‘अलमोस्ट’ समझदारी छ। त्यसका लागि स्थानीय चुनावलाई केही पर धकेलेर राष्ट्रिय चुनाव अलिकति यता ल्याउने कुरा समझदारी गरेर गर्न सकिन्छ।
नेपालखबर अनलाइनबाट साभार
#कांँग्रेसको १४ औं महाधिवेशन